Wararkii Ugu Dambeeyay Ololaha Doorashada ee ka socda Muqdisho iyo Musharaxiinta qaar oo bilaabay in ay... - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa sii xoogeesanaya ololaha ay wadaan Musharaxiinta u taagan Xilka Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana Mashquul badan laga dareemayaa Hoteelada Muqdisho qaarkood iyo xarumaha ay degan yihiin Musharaxiinta.
Ololaha Xoogooda waxaa wada qaar kamid ah Musharaxiinta Madaxweyne kuwooda ugu saameynta badan tartanka adagna uu u dhaxeeyo, waxaana xalay ilaa saakay laga dareemayaa mashquul badan xarumaha ay degan yihiin Musharaxiinta qaar.
Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya gaar ahaan Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ayaa wada ololaha ugu xoogan, waxaana Musharaxiintan daqiiqad kasta la kulmayaan Xildhibaano katirsan labada Aqal si ay kalsooni uga helaan.
Xildhibaanada Labada Aqal ayaa dhankooda marba musharax la kulmaya kuwaa ay la galayaan gor gortan dhinacyo kala duwan leh, waxaana Xildhibaanada musharax waliba u balan qaadayaan in ay siisanayaan codkooda.
Musharaxiinta Madaxweyne qaarkood ayaa la arkayay iyaga oo u ololeenaya Musharaxiin kale ay isleeyihiin waa ay ku guuleesan karaan kursiga loo tartamayo, waxaana suurta gal ah in saacadaha soo aadan ay tanaasulaan Musharaxiinta qaar.
Waxaa sidoo kale magaalada Muqdsisho ka socda kulamo gaar gaar ah ay leeyihiin Musharaxiinta tartameysa qaarkood kuwaa oo sameestay isbaheysi ay ku doonayaan in ay kusoo saaraan midkooda ugu codka badan wareega ugu dambeeya.
Siyaasiyiin iyo xubno kale oo dalaaliin ah oo u dhaxeeya Xildhibaanada iyo Musharaxiinta ayaa iyana shaqo badan kawada Hoteelada magaalada Muqdisho , waxa ayna dalaaliintan Xildhibaanada usoo bandhigayaan lacago waali ah si codkooda u siiyaan musharaxa ay wataan.
Lacagta lagu kala iibsanayo codadka Musharaxiinta ayaan wali dhiibisteeda si rasmi ah aysan u bilaaban, waxaana lafilayaa in lacag badan galabta ilaa caawa ay suuqa soo gasho laguna kala iibsado codadka Xildhibaanada labada Aqal.
Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa wali waxaa adag cin la ogadao cida kusoo baxeysa, waxaana tartanka ugu adag laga yaabaa in uu dhax maro Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Xasan Sheekh iyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed.